July 12, 2019 - CeleLove
ဘယ်တော့မှ မဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၄) ခု…
ဘယ်တော့မှ မဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၄) ခု… မိန်းကလေး တယောက်က သင့်ကို တကယ် ချစ်မိသွားပြီ ဆိုရင် သစ္စာ ဆိုတာ သင်မတောင်းလည်း သူ့ဖက်ကနေ ပေးပြီးသားပါ ။ သစ္စာရှိပြီး ဘယ်တော့မှ ဖောက်ပြန်မှာ မဟုတ်တဲ့ ချစ်သူကို သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် သင်အရမ်း […]
နေစရာမရှိလို ကျူးကျော်တဲအိမ်လေးမှာနေနေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ချစ်ကြတဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ဦးဇော်ကြီး
နေစရာမရှိလို ကျူးကျော်တဲအိမ်လေးမှာနေနေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ချစ်ကြတဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ဦးဇော်ကြီး မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ မစို့မပို့ ၀င်ငွေလေးရယူပြီး ဇာတ်ကားတစ်ကား ကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ လူကြမ်း အနုပညာရှင်တွေ ရှိကြပါ တယ်။ သူတို့ဟာ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာတော့ လူယုတ်မာကြီးတွေ မုဒိမ်းကောင်ကြီးတွေ ၊ ကောက်ကျစ်တဲ့သူတွေအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရင်း ပြင်ပဘဝမှာ မိသားစု စားဝတ်နေရေးတွေကို […]
သက်ငယ်မုဒိန်းကို သေဒဏ်ပေးလိုက်ရင် မလိုလားအပ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေပိုများလာမယ်ဆိုတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် ….
သက်ငယ်မုဒိန်းကို သေဒဏ်ပေးလိုက်ရင် မလိုလားအပ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေပိုများလာမယ်ဆိုတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် …. ဝါရင့်အနုပညာရှင်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်ကတော့ ယနေ့လက်တလော မြန်မာ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့တစ်ဦးတည်းအမြင်ယူဆချက်တွေကို မီဒီယာတွေကနေ ပြောပြလာတာ ကိုလည်း တွေ့ရပါ တယ် …။ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေဟာ မြန်မာ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာဆိုသလို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကြားသိနေရတဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ […]
သီချင်းထွက်ထွက်ချင်း မိနစ်ပိုင်းလေးမှာတင် ကြည့်ရှုသူ များပြားခဲ့တဲ့ အားတီရဲ့ အကြမ်းစား Music Video လေး
သီချင်းထွက်ထွက်ချင်း မိနစ်ပိုင်းလေးမှာတင် ကြည့်ရှုသူ များပြားခဲ့တဲ့ အားတီရဲ့ အကြမ်းစား Music Video လေး လူငယ်ကြိုက် သီချင်းများစွာနဲ့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီး ရေပန်းစားနေတဲ့သူကတော့ အဆိုတော်အားတီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ သီချင်းများစွာဟာလည်း လူငယ်တိုင်းရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားလျက်ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော် […]
ပုဆိုးလေးနဲ့ ခန့်ညားလိုက်ဖက်လွန်းတဲ့ မြန်မာမင်းသား (၁၁)ယောက်
ပုဆိုးလေးနဲ့ ခန့်ညားလိုက်ဖက်လွန်းတဲ့ မြန်မာမင်းသား (၁၁)ယောက် မြန်မာအမျိုးသားတွေ တမြတ်တနိုးဝတ်ဆင်ကြတဲ့ အရာကတော့ ပုဆိုးနဲ့ တိုက်ပုံပါ။ တိုက်ပုံကတော့ တကယ့်ကို အေ ရးကြီးတဲ့ ပွဲတွေ မှာဆိုရင် ၀တ်ဆင်ကြတာပါ။ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ ပွဲ၊အခမ်းအနားနဲ့ ဘုရားသွားကျောင်းတတ်တွေ မှာဆိုရင်တော့ အမျိုးသားတော်တော်များများက ပုဆိုးကို ၀တ်ပြီး တက်ရောက်ကြပါတယ်။ […]
“ဖုတ်” ၀င်တယ်ဆိုပြီး သေတဲ့ အမေအိုတစ်ဦးရဲ့ အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံမှာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်သောအခါ…. အရမ်းကောင်းလို့ဖတ်စေချင်တယ် ” မသိလိုက်သော ပဉ္စာနန္တရိယကံ ” တကယ်ဖုတ်မဟုတ်ဘဲ မိဘအရင်းကို ဖုတ်ထုတ်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်သည်ဖြစ်စေသူတစ်ပါးကိုလုပ်ခွင့် ပေးသည်ဖြစ်စေ၊ အဲဒီသားသမီး ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်သောပဉ္စာနန္တရိယကံကြီးထိုက်ပါ တယ် …။ ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုပြီး အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အဖွားတစ်ဦး ကိုယ်တွေ့လေ့လာဖူးပါတယ် …။ […]
AIR-CON ထဲက ထူးဆန်းတဲ့ အသံတွေရဲ့ တရားခံကြောင့် အံ့သြတုန်လှုပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
AIR-CON ထဲက ထူးဆန်းတဲ့ အသံတွေရဲ့ တရားခံကြောင့် အံ့သြတုန်လှုပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား Air-Con မအေတော့တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ထူးခြားတဲ့ အသံတွေ များ Air-Con ထဲကေ နထွက်လာရင် လုံးဝ မပေါ့ဆသင့် ကြောင်း ထိုင်းအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်က သက်သေပြနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ worldofbuzz ရဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားတာပါ။သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ […]
တသက်လုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသစ္စာမဖောက်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဆရာသက္ကမိုးညို…. အခု ဖြစ်ပျက် နေသမျှကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အားနည်းမှု၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ စွမ်းဆောင်ရည် မပြည့် ၀မှု၊ ခေတ်ဟောင်းက လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကို ဖက်တွယ် ထားမှုတွေကို မြင်နေရပါတာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ရတဲ့ […]
ချောင်းဆိုး၊ ရင်ကြပ်၊ သလိပ်ကပ်သူများ ချက်ချင်းပျောက်စေနိုင်မည့် ဆေးနည်း… ချောင်းဆိုး၊ ရင်ကြပ်၊ သလိပ်ကပ်သူများ ချက်ချင်းသောက် ချက်ချင်းပျောက်စေနိုင်မည့် ဆေးနည်းပဲဖြစ်ပါတယ် … ။တကယ် လက်တွေ့ ပျောက်ကင်းပါတယ်ခင်ဗျာ … ။ ချောင်းဆိုး၊ ရင်ကြပ်၊ သလိပ်ကပ်၊ ဘာကြောင့် ချောင်းဆိုးဆိုး၊ ရင်ကြပ်ကြပ် ပဲပင်ပေါက် ရှိရင် […]
ကိုမြင့်မြတ်နဲ့ ရည်းစား ၃ ခါဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုပီး ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ထက်ထက်ထွန်း
ကိုမြင့်မြတ်နဲ့ ရည်းစား ၃ ခါဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုပီး ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ထက်ထက်ထွန်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လောက်မှာ စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမတ်လောင်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူသိများလာတဲ့ အလှမယ် ထက်ထက်ထွန်းကတော့ လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေ ဆက်တိုက်ရိုက်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ် …. ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အောင်မြင်စပြုလာတဲ့ ထက်ထက်ထွန်းကတော့ မကြာခင် […]